MUUQAAL: Xasan Sheikh “Madaxwayne Farmaajo waa Nin Naag uu Furay Weli ilmo ka dhalaya, Xukuumaddu Sharci maaha” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Xasan Sheikh “Madaxwayne Farmaajo waa Nin Naag uu Furay Weli ilmo ka dhalaya, Xukuumaddu Sharci maaha”
Sep 15, 2020 - 27 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xasan Sheekh Maxamuud Madaxwyanihii Hore ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo in dastuurka ku xadgudbay, Islamarkaana wuxuu tilmaamay inaanu Maalin keli ah ku dhaqmin dastuurka sida uu hadalka u dhigay.
Shir jaraa’id oo magaalada Muqdisho, ayuu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, isagoo si gaara isu dul taagay khaladaadka dhinaca sharciga ah ee dhacayay mudooyinkii la soo dhaafay.
“Madaxweynuhu waxa uu sameynayo dastuurka sax kuma ahan, waxba kama duwana Madaxweynaha waxa uu sameynayo nin gabadh ay kala tageen weli ilmo u dhaleyso, xaaskii ay kala tageen oo furay asoo weli xaas ay u tahay oo kale waaye, Xukuumadda maanta jirtana waa saas, sharci maaha, waa sharci darro” Ayuu yidhi Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambayn shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay iney dalka badbaadiyaan oo aysan ku sii fiirsan xaaladdan halista ah ee uu haatan ku sugan yahay, maadaama madaxweyne Farmaajo uu indhaha ka fiirsanayo xukuumad sharci darro ah oo dalka ka jirta.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA XASAN SHEIKH
Xasan sheekh iyo farmaajo midna rajo fiican malaha sida lagu yaqaannay soomaalida Marka xasan waxaan dhihi lahaa karaamada iska qaadin wakhti iyo lacagna ha iska lumin.
Madaxyada iimuuqda waa kuwaan horay u aragnay waxaan rabnaa in rag macquula soo baxaan.
Kalahage adeerow, anigu Farmaajo waan taageera, taageeraduna ma ahaa mid iska timid ee waa iga keensaday EE BAL adigu ii sheeg waxaad ku dhaliilayso. WBT
Xassanow C/llaahi Ciise ayaa adeerkaa ah oo kursiga wareejiyey asagoo ahaa Halgamaagii UN geeyey Sharafta iyo Calanka Soomaaliyeed
Xassanow Aadan Cadde ayaa adeerkaa ah oo ah Madaxweynahii ugu horeeyey Qaaradda Africa oo la doortey, haddana doorasho uga degay.
Xassanow Cali Mahdi ayaa adeerkaa ah oo ah ninkii Xoriyo ku soo celiyey Sharaftii laga dhigey 1967.
Xassanow Shiikh Shariif ayaa ina adeerkaa ah oo Xamar ka xoreeyey AXMAARTII ku soo duushey Caasimadda Shanta Soomaaliyeed, kadibna adiga kugu wareejiyey Xoriyo.
Xassanow adigaa ah ninkii Xoriyo ka saarey Kumeel gaarkii, adiguu ahaa ninkii Kursiga ku wareejiyey Farmaajo.
“Iska dheh dabshidaw, waxaagu waa afkaa jeexan” Waxaad isku garaacday wax xaqiiq u dhacay iyo wax waqtigu bixiyey iyo daalkii ummadda. Taariikhda Xasan waa M/weynihii ugu liitay ee soo maray Somali. Xasan isagaa isu maahmaahay, waayo, maandeeq-xoriyaa furtay Xasan oo lacag ku bixiyey inuu soo noqdo, baa halhays ku cusub Somalida ku soo baxay “Lacagi waa qaadasho , codkuna waan ognahay qofkaanu siinayno”
WAH WAH, waxaasaa Qabyaalad lagaa yiraah, WAR ku ducaysta Inuusan ILAAHEEN SWT xukun idinku dhiibin Dabshid. ≈©≈WAR ninka Qabyaalad baa oofsate ma MATTAANKI Xaanga?!!!. WBT
Somalia waxaa la isku haystaa waa mustaqbal yaan nina dhayalsan.
1.Gobolo xora oo Xamar wax u yeerin karin oo federal state ah, talada dalka dowladda dhexe kula xisaabtama
2.Maamul adag oo Xamar ka jira sida kii Kacaanka oo ayaga waxwalba ka go,do.
Deni iyo Madoobe kan hore rabaan
Farmaajo kan dambe rabaa..
Inta kale waa lakala jiraan.
Intiina siyaasadda Somalia xiisaynaysa idinka oo caytamin oo anaa wadani oran mid raac, noona sheega sababta u rabto in danta ummadda Somalida ku jiro.
LOP Saaxib, horta haddaanan Farmaajo WAA Waddani orakarin maxaan ku sifeeya?. ≈©≈ SAAXIIB aan adiga sùaal ku weydiiye, MA garatay sababta uu Farmaajo markasta Gacmaha u mayrto/dhaqdo (bal fiiro u yeelo). ≈©≈Deni iyo Axmed Madoobe Shaxaadkiya la galay Qabyaalad XUUUX!!!. WBT
Nin Shiikhaal ah oo ceel ku dhacey oo marna oo Naftu ka socoto ayaa la dhahey
( war gacanta keen, war gacanta keen)
Diid inuu gacanta soo taago
Ninbaa dhahey ( Horta ninku yuu yahey)
– Shiikhaal miyaa la dhahaa gacanta keen
Ninku intuusan dhiman dhaha ( WAR GACANTA HOO, WAR GACANTA HOO).
hadda Farmaajo ha moodin nin sidaad leh adeeradey ayaa xilka wareejin jirey – EE ANNA XILKA IGA HOOYA.
Maya ninka haloo aqriyo Buug uu fahmaayo
– Kursiga ka kac ama sidii Adeeradaa Ayaad EXILE KU DHIMAN.
Dhowr jeer maalmihii ina dhaafay waxaan halkaan ka dheehday adoo odaya C/Raxmaan (adiguna ka dhigatay ustaad), oo aanu halkaan mudo dheer asxaab fadhi ku dirir ku noqonay/weli nahay, aad ku tuhuntay inuu garta dhinac keliya ka eego.
@ Garqaad la soco: sxb-kay C/Raxmaan IL BUU KA CAWARMAY, hadaad rabto inuu gar dhex dhexaada kuu qaado is dhinac taag isha uu wax ku arko. Markaas ayuu gar ku siin!kkk
Naag la furey ayaan caruur ka dhali
Iyo dowlad Parliament ridey ayaa sharki sameyn
Maxey ku kala duwanyahiin AQRISTOW
Aniga go’aankayga waa ii cad yahay, waxaa rabaa dowladda dhexe oo miciyo wax u qaniini karto lahayn oo maamulada ka adag yihiin madaxda maamulada Vito leeyihiin oo iyo kan dowladda dhexe hogaaminaya doorasho shacab ku joogo oo si sharci ah lagu soo doortay.
Dowladda dhexe wax awood ah ku lahayn nimanka matalaya maamul goboleedka.
No more Ilma Gareen in other Words.
Doorasho la musuqmaasuqi karin ka dhacdo dalka oo dhan gobol iyo dowladda dhexe, ninka shacabka matalaya yahay nin/naag ayaga keensadeen from tuulo.
Waa haddii la rabo in dhibka laga baxo..
Qabiilayste iyo agoontii Kacaanka buuq wadaan, laakiin yaa u joojin.
Walaan mardambe nin aqoon tuuladdayda waxa shacabka ku nool yihiin maxa iga garaacayn.. That era is dead.
Free Somali people, federal, democratic and Prosperos…
Ummad aan ka baqin kan xukuma ayaa horumar gaari karta…Somalia we are already there.
Shirkii balbalaarka weli waxba kama soo bixin miyaa.soomaali kaligood inay wax soo saaraan lagama yaabo.
10 maalmood markay xoolaha dadka ka dhameeyaan ayey adeerkood u wacan doonaan.
War ninkii malez ahaa waa loo darsaday shirku labo maalmood ka badan ma socdeen.
Xasanow, Marna kama maqal Alshabaab Waddanka halaga saaro, Kaama maqal HALA doono Reer Waqooyi, MARKI la dhisay Maamulki Galmudug Waxaa tiri; “Maamul la dhiso kana u dambeeya” MACNAHA shacabka; Ciise, Gadabuursi, Isaaq, Warsangeli, Dhubahante iyo beelaha kale ee dega Waqooyiga Somalia WAXBA iigama dan aha, haddaba adeerow seed ku damacday inaad noqoto M/weynihi Ummadda Somali? HALKAA waxaa ku Cad aragtida Aad ka qabto Garaadka Ummadda Somali. ≈©≈Insha-ALLAAH arkidoone doonne INAAD aragtidaa meel ku gaarto. WBT
Imisaa rwasaare shaqada laga eryay
Waxaa loo maray jidkii saxda ahaa
Rwasaare Hassan ali kherye waa la
Adiguna waxaad kow ka eheed kuwii
Soo beenta soo xuuraami jiray
Dahab lumay ninba si u doon doon
4 sano hadad madaxtoyo jogtay maxad ka tagtay
1 muduqmasuq eex iyo Qabiil hantidii Loo boobo
2 markii ugu horaysay oo hablo somaliyed carab loo
3 madaxwaynihii ugu horeyey oo jigjiga dhanteeya
4 mydkii kukuuyada oo loo sujuudo… sory abdi iley
oo jilbaha la qabsado
Ragaas ayaa weli raba inay Qaranka sii dhacasn
Waxaan ka sii naxay markuu hadalka furay shariif
Sakiinkii amxaarka ahaa
Jabhad, waa saas adeer KII aan ogayn ha ogaadee. WBT
Idunka mexey isukiin dhamaan.
Shariif waa diideen.
Xasan sheekh waad diideen.
Farmaajo waa diideen.
Waxaad rabtaan. Oon melez amxaaro aheyn miyaa jiro?
Melez ma dhiman.
Luqada turkiga yaan la baran. Ee luqada xabashida iyo kukuuyada halla barto.
Muqdisho Maaha somaliya.
Jabhadoow. Rejo intee la.eg ayaad ka leedahay nin kablalax ahi in uu xuriyo fadhiisto?
Anigu waxaan ahay igaar hiraab sida laysheegay. Xuriyo nimaan hiraab aheyn haduu fadhiisto waxaan u aqaan shil dhacay.
War ka xishoo madaxda.
3 Nin oo Daarood ah ayaa xukunka soomaaliya soo maray ilaa iyo 1960.
Nin si caadiya xukunka u wareejiyey lama hayo.
Farmaajo ayaa hadda jooga isagana falfal xumada uu wado marka aan u fiirsaday ifafaalo fiican sooma wado.
Dabshid point ayuu inaga joogaa,waana arin sax ah.
Anigoo og in C/laahi Yuusuf la majaxaabiyey oo caadifad lagu diidey.
Anigoo og in C/rashiid uu dhintay oo isagu dambi aan lagu saari karin xukun wareejin.
SOMALIDA NINKA WAALAN
ilaa uu maryaha dhigo ma garato baa maqli jiray, duqaan xaalkiisa caadi maahan!!!
Inkastoo aanay is dhaamin hadana ninkaan qoyskiisa hoose ka warqabkiisaa ku waajibay..
Qabyo iyo Qaran kala dhiman ayaan diiday horta
Somalia waxaa soo maray
1— madaxwayne adan cade
2—- madaxwayne abdirishiid
3—-madaxwayne siyad bare
halna ogaada madaxwayne waxaa ah ninka dhulka
Somaliyed gees ilaa ka gees xukunkisa gaaray oo
Shaah ka soo cabay dalkenu markuu burburay
Dowladihii la dhisay ee madaxoda muuqday dalkana
aan xukumin lama oran karo dowlado dalkaan soo
Xukumay tusaale xasan kheikh hadii u madaxwayne
Noqon lahaa dalkan oo nabad ah maanta kursigii
Qabyo ma radiyen oo meel ayuu farisan lahaaa
Sharaf iyo karamo ayuu yeelan lahaa marka la isku
Soo daro runta dalkeena waxaa xukuma xoogag
Shisheeye iyo shuko wayn beeso ku so saarta
Hadba ninkii u wakiil ah
HAAWEYDA HAWIYE, waxaa ku dhahaa… MOORIYAANEEY is-dejiya…
XAAR FARMAAJO, waddanka waa laga qabanayaa… xeelad ama dagaal ha looga qaadee..
XAAR FARMAAJO, kuwa wadanka ka xoreenayaa waa KABLALAX DAAROOD…
Nafta horiyaasha SOOMAALIWEYN ee KABLALAX DAAROOD..
KABLALAX DAAROOD, ma himigooda xukun raadis..
KABLALX DAAROOD, himigooda waa badbaadinta wadanka, nabada, dimuqraadiyada iyo xkukun wanaag.
Marka, HAAWEYDA HAWIYE, is-dejiya.. SOOMAALIWEYN ILAAH WEYNI waa leedahay, RAGNA waa leedahay, waana KABLALAX DAAROOD..
MOORIYAANTA SADE DAAROOD dhaqan xumada ay SOOMAALIWEYN kula kaceen, loo dul-qaadan maayo…
Xagee lagu arkay.. GABDHO LA KUFSADAY OO DABAQA 5AAD LAGA SOO RIDAY..
Xagee lagu arkay.. WIIL 10 jidh ah, oo lagu kufsaday magacii askarta..
SADE DAAROOD, dhaqankii midgaha ay la yimaadeen, magacii DAAROOD ISMAACIIL na weey huwan yiheen.
TAAS LAGA YEELI MAAAYO.. It will never happen again and again.
HAAWEYDA HAWIYE, please wait and see how KABLALAX DAAROOD kicks out the ruined and corrupted regime of SADE DAAROOD
Odayada beelaha ree hebel oo digniin soo saaray.
Madaxwaynayaashii hore oo hanjabaad soo saaray.
Isnahaysiga xisbiyada oo digniin soo diray.
Afhayeenka beelaha oo digniin kama danbays ah iyo hanjabaad hawada mariyay.
Beesha caalamka oo dawladda u digtay.
Mucaaradka oo qayliyay. Ashabaab oo hanjabay. Qorigii caddaa oo la diyaariyay.
Shariif Sakiin oo tobaz tii soofaystay.
Jawaari oo soo 3 kacleeyay. Faysal waraabe oo soo hanjabay. Dani iyo Madoobe oo dacwooday…
Waa isla intii 30kii sano ee la soo dhafay dalka xuurtada ku haystay waxan wada qaylinaya… Waa meelbelo degtay…
Nin daad qaaday xumbo cuskay.habar dhali weyday aleelo ku waalatay.hada kuwii ku fashilmay hogaaminta dalka ayaa waxay na lee yihiin mar labaad baan dhalanay oo hadaan soo daahirnay war adeerayaalaw meel naga fariista waa laydin soo tijaabiyee waadna fashinteene aayar iska nasta oo caruurtiina korsada hadii kale waa laydin xisaabin. Madaxtinimo iyo xishood baa quustay
Bal aan wax ka iraahdo marxumadii XAMDI ee la
Isugu daray kufsi iyo dil fool xun waxay u egtahay
Arintii caisha hadaba waa inay cadalad hesha intant
La dulmay mar waxan is irahda ma eyan helin
Codad ababulan oo u hadla hablaha somaliyed waa
In loo istaga waa isku mide
Nin reer Mudug ah inaad tahey horey xerta kalshaale u wada arkeen, intaan ka aheyn AGOONTII KACAANKA oo ayagu xitaa ka xanaaqi jirey DHAGEYSIGA BBC.
Farmaajo xitaa hadduu Parliament Xamar Xilkii ka xayuubiyey Co-Madaxweyne Kheyre
Maxaa kuu diidey inaad qolka ka soo baxdo oo aad u socoto siduu Kheyre u soconjirey
Kormeer Dekedda Xamar
Kormeer Airport Xamar
Kormeer Degmadaada Deyniile
Kormeer Qasnadda Eedo Batuulo
Xitaa kormeer Caruurta Imbiliga ku dheesho Beerta Nadda
– War ninku fuleysanaa, mise fadhiid ayuu ahaan jirey.
* Kurtun lagu sirmey iga dheh
Saalaan ka dib.
Adeer aniga iyo adiga dad waaweyn nahay oo waan dhimanaynaa ee dadka u haraya dalka aan waddo fiican ku ridno oo mustaqbalka nolol ku samaysankaraan oo gaal iyo muslim u baahnayn..
Dalku ka badan umadda Somaliyeed.
Aniga ma oran Farmaajo wadani maaha ama Deni ayaa wadani ah waxaan iri= Dooda adinka oo wadani anaa ah ee adiga ma tihid lagu doodin,
Deni iyo madaxda kale gobolo ayaa doortay Farmaajo Somali ayaa dooratay..
Dalka dantiisa maaha in kuwana waa dabadhilif erayadii Kacaanka lala yimaado qaarna wadanimo la huwiyo… aqli hala yeesho ayaan iri.
Aniga caawa Deni iyo Farmaajo qabiil u kala raaci maayo laakiin Deni igu fikir noqday maadaama uu doorasho iyo gobolada madaxdooda usoo dirsadaan dowladda dhexe rabo.
Ma rabo nin Xamar fadhiyo xildhibaan ama madaxweyne maamul gobol ii keeno, waa in maadama caruur dhiban oo baahan haysata ayayada kii dan moodo soo dirsan karto..run
Waa taas u jeedadaydu.
Hadalkayga ma aadan fahmin.